Vaovao – Athis Fanantenana
Toa izao indray ny raharaha sy vaovaom-piangonana voaray farany.
Vaovao eto amin’ny Tafo FPMA Athis Fanantenana :
Fotoam-pivavahana manaraka :
Alahady 19 septambra 2021 manomboka @ 16h00 tsy diso ao amin’ny Eglise Saint denis d’Athis-Mons.
Fiantsoam-pivoriana sy fanentanana fisoratana anarana Sekoly alahady :
Miarahaba antsika rehetra amin’ny anaran’ny Tompo.
faly izahay mpiandraikitra sekoly alahady Athis Fanantenana mampandre antsika, fa hanomboka ny alahady 26septembre ny taom-panabeazana sekoly alahady eto Athis-Fanantenana.
Misokatra araka izany ny fisoratana anarana ho an’ireo zanatsika.
Izany dia azontsika atao « version papier » (formulaire en pièce jointe), na « en ligne » amin’ny alalan’ny lien etsy ambany.
Manindry eto raha hisoratra anarana
Ho fanomanana ny fidirana ihany koa dia manasa antsika ray amandreny izahay amin’ny fivoriana voalohan’ny taona ho tanterahina ny alahady 19 septembre amin’ny 14:30 izay hitondrantsika ambavaka ireo zanatsika mandritra ny taona sy hitondrana amintsika ny vaovao samihafa eto amin’ny sampana sekoly alahady.
Fanamarihana ny fisoratana anarana dia ho an’ny ankizy rehetra na ireo efa mpianatra teo aloha na ireo ankizy vaovao.
Mirary ny fitahian’ny Tompo ho amintsika tsirairay avy.
Fanavaozana ny lisitrin’ny mpandray :
FARA-FISORATANA ANARANA ny zoma 17 septambra 2021.
Ity ny rohy fisoratana anarana ho mpandray ny fanasan’ny Tompo :
Fivoriamben’ny mpandray – Fifidianana diakona :
Taratasy voaray avy any ivelany :
Filazàna manjo Faritany AFovoany ANdrefana (FAFAN)
RADISON Edmond Louis – Ferapara
Komitim-paritany faharoa : fiantsoana KP2 FAFAN
FAfAn – KP2 – Fiantsoana fivoriana 25092021
RIB Fiangonana :
RIB ABE :